केराको एक खम्बामा पाँच सय पचास कोसा ! - Everest Dainik - News from Nepal
केराको एक खम्बामा पाँच सय पचास कोसा !
म्याग्दी, जेठ १६ । बेनी नगरपालिका–२ खवरामा एउटै केरा घारीमा पाँच सय ५० वटा कोसा केरा फलेको छ। म्याग्दीको खवरा गाउँ केराखेतीमा नाम चलेको नगरपालिका रहेको छ।
नगदे बालीका रुपमा रहेको केरा खेतीमा म्यादीका किसान आर्कषित हुन थालेका छन्। उनीहरुले अहिले परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएको कोदो मकैलाई विस्थापित गरेर केरा खेतीमा लागेका छन्। रासस
ट्याग्स: Banana myagdi